अब नेपालमा यस्तो कानुन: विदेश जाने पुरुषको श्रीमती भगाए ५ लाख जरिमाना – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /Banner news/अब नेपालमा यस्तो कानुन: विदेश जाने पुरुषको श्रीमती भगाए ५ लाख जरिमाना
पाँचथरको प्रङबुङ गाविसमा दुई वर्ष अघि गाउँलेले बनाएको नियम अहिले पनि जारी छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ, वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रीमान विदेशिने क्रमसँगै श्रीमतीले अनैतिक कार्य गर्ने गरेकाले समाजमा विकृति भित्रिएको भन्दै स्थानीयले अर्काकी श्रीमती लैजानेलाई ५ लाख जरिवाना तिर्ने पर्ने नियम बनाए ।
अर्काकी श्रीमती लानेलाई तत्काल सभा बसेर स्थानीयले ५ लाख रुपैयाँ तिराउँछन् ।
सो रकम पीडित श्रीमानका लागि रहात हुने स्थानीयको भनाई छ । तर पछिल्लो समय यस्ता नियमले समेत समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गत वर्ष दर्ता भएका मध्ये आधाजसो मुद्दा श्रीमान श्रीमतीबीचको बेमेलसँग सम्बन्धित छ । २० वटा सोही प्रकृतिका मुद्दामध्ये ९ मा श्रीमान विदेशिएपछि असमझदारी देखिएको छ ।
हेल्थ टिप्स : नियमित योग गर्नुका फाइदा
योग नेपालको परम्परागत व्यायाम विधि हो । योगले धेरै कुरामा फाइदा गर्छ । योग स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुँदा विश्वभर यो विधि अपनाउन थालिएको छ ।
योगले मानसिक ,शारीरिक र नर्सर्ने खालको विभिन्न रोग नलाग्न र लागेको व्यक्तिहरुलाई पनि धेरै फाइदा पु-याउँछ । योग यस्तो महाज्ञान हो जसले धेरै रोगलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । चेतनाको स्तर बढाउनको लागि, शरीरलाई स्वास्थ राख्नका लागि र शरीरको विकार हटाउनको पनि योग सहयोगसिद्ध हुन्छ ।
योग किन गर्ने ?
आधुनिकताको नाममा विभिन्न किसिमको शारीरिक अभ्यासहरु गर्न छाडिसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा मानसिक समस्या धेरै भएको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा योगले सहयोगी बन्न सक्छ । योगले शरीरको अङ्ग–प्रत्यङ्गलाई संचालनमा सहयोग गर्छ ।
शरीरको हार्डजोर्नी, नसा, ढाडसम्बन्धी रोग भएकालाई पनि योगले फाइदा पु-याउँछ ।
जो अल्छी मानेर बसिरहेका हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई मानसिक समस्या भने भइरहन्छ । यस्तो अवस्थामा योग गर्ने हो भने सकारात्मक बनाउने काम गर्छ । योगले मान्छेलाई मनोवल बढाउने र उत्साह जगाउने काम गर्छ ।
त्यसैले सबै उमेर समूह, सबै क्षेत्र र सबै वर्गका व्यक्तिले योग गर्न जरुरी रहेको छ । योगमा अन्तरमुखी र बाह्यमुखी अभ्यासहरु हुन्छन् । अन्तरमुखी योग भनेको भित्रभित्रै आफूलाई कस्तो खुशी पार्ने भन्ने तरिकाले गरिन्छ । भौतिक साधनले मात्रै मान्छे खुशी हुँदैन, जसलाई अन्तर मुखी अभ्यासले खुशी पार्न सकिन्छ ।
मनलाई खुशी र मानसिक समस्या हटाउनको लागि योगको ठूलो भूमिका हुन्छ । तनावको कारण पनि शरीरमा रोग लाग्छ । तनाव भयो भने त्यसले अल्सर हुन सक्छ । अल्सरपछि क्यान्सर पनि हुन सक्छ । यस्तै मधुमेह, ब्लड प्रेसर, हृदयघात हुने समस्या पनि हुन सक्छ ।
दैनिक ३० मिनेट समय दिनुस्
योग सबै व्यक्तिले गर्न आवश्यक छ । योगको लागि दिनमा ३० देखि ४५ मिनेट सम्म समय खर्च गर्दा राम्रो हुन्छ । नियमित योगले खानपान र निन्द्रा राम्रो हुन्छ । हार्डजोर्नीहरु बलियो हुन थाल्छन् । योग गर्दा १० मिनेट फिजिकल, १० मिनेट श्वास—प्रश्वास र १० मिनेट मनलाई आनन्द बनाउने ध्यान गर्न सकिन्छ । मिलाएर योग गर्न सकियो भने स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ ।
कुन समयमा योग गर्दा राम्रो हुन्छ ?
योग कस्ता व्यक्तिले गर्ने ?
योग सबै उमेरका व्यक्तिले गर्न सकिन्छ । बालबालिकाको हकमा भने ३ देखि ४ वर्षको उमेरबाट नै योग सुरु गराउन सकिन्छ । योगले बालबालिकाको बौद्धिक क्षमता वृद्धि गर्नसहयोग गर्छ । यस्तै वृद्धवृद्धाले पनि गर्न जरुरी हुन्छ । रोगले सिकिस्त भएको मान्छेले पनि योग गर्न जरुरी छ ।
गर्भवती महिलाले पनि योग गर्नुपर्छ । गर्भवती महिलालाई स्ट्रेस हुन्छ । विभिन्न किसिमका लक्षणहरु गर्भावस्थामा देखिन्छन् । त्यो बेलामा मनलाई शान्त पार्ने खालको प्रणायम, ध्यानहरु गर्न सकिन्छ भने पेटमा बल नपर्ने खालको हात खुट्टा चलाउने, लामो —लामो श्वास फेर्ने खालको शरीरिक अभ्यास गर्न सकिन्छ ।
लामो समयपछि हिमानीको मायाले पारसलाइ तानेपछि…..
दशैंमा रिलिज हुने गरि बनाइने भनिएको ‘छक्का पन्जा-४’ यो वर्षलाई स्थगित, दिपकराजलाई लगानी डुब्ने चिन्ता
कुवेतमा २८ नेपालीको बास सडकमा
‘राम्रो काममा काङ्ग्रेसको सहयोग रहने’